Madaxweynaha oo soo dhaweeyay Xildhibaan ka socda dowladda Maraykanka – SBC
Madaxweynaha oo soo dhaweeyay Xildhibaan ka socda dowladda Maraykanka
Posted by Webmaster on February 19, 2013 Comments
(Muqdisho,Soomaaliya,Febraayo,19 2013)Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta Muqdisho ku soo dhaweeyay Xildhibaan Keith Ellison oo ka tirsan xildhibaanada Maraykanka.
Kulankan oo qaatay muddo 45daqiiqo ah ayuu Madaxweynaha wuxuu ku wargeliyay Xildhibaanka muhiimadda uu leeyahay xiriirka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Mareykanka.Sidoo kale Madaxweynaha ayaa uga waramay Xildhibaanka horumarka ay Soomaaliya gaartay, iyo in Soomaaliya ay hadda ku jirto xaalad ay kasoo kabsaneyso dhibkii ku dhacay.
Madaxweynaha ayaa uga mahad celiyay dowladda Maraykanka taagerada dheer ay dowladda Soomaaliya taagertay. Wuxuna sheegay in gobolka Minnesota ay degan yihiin Soomaalida ugu badan marka laga rebo qaaradda Afrika. Sidaas darteedna waxaa farxad noo ah in Xildhibaanka uu ogaado xaaladda dhabta ah ee ka jirto Soomaaliya. Waxaana rajeynayaa in uu farintaas oo ka warbixineysa horumarka ka jira halkaan u gudbiyo.
Madaxeyne Xassan ayaa ka hadlay cadaaldda iyo muhiimadda ay u leedahay dowladda uu Madaxweynaha ka yahay. Wuxuuna sheegay in ay ka mid tahay tiirarka ugu muhiimsan lixda Tiir Siyaasadeed ee dowladda, kaas oo lagu doonayo in Soomaaliya nabada dib loogu soo celiyo.
Bishii lasoo dhaafay ayuu Madaxweynaha booqasho muhiim ah ku aaday caasimada dalka Maraykanka ee Washington waxaana halkaas ku soo dhaweeyay Xildhibaano ka tirsan labada aqal ee Maraykanka, kuwaas uu horkacayay Xildhibaan Keith Ellison. Sidoo kale Xildhibaanka ayaa Madaxeynaha ku casuumay gobolka Minessota waqtigii uu ku sugnaa Maraykanaka..